Ny marketing amin'ny mailaka rehetra izay sizily dia tsy spam | Martech Zone
Ity infographic avy amin'ny LeadPages, dia vahaolana momba ny pejy, manome fahitana lehibe momba ny marketing amin'ny mailaka sy ny statistikan'ny SPAM. Ny lakilen'ity fampahalalana ity dia firy mailaka ara-dalàna miakatra ao amin'ny folder junk. Ny vintana dia any amin'izay misy ny maro aminareo koa.
Ny mailaka mifototra amin'ny fahazoan-dàlana dia mitarika hatrany amin'ny vidin'ny click-through sy ny tahan'ny fiovam-po. Orinasa marobe no mametraka ny ezaka rehetra ataony amin'ny paikady ahazoana fiara hitaterana fifamoivoizana bebe kokoa ka hadinon'izy ireo ny fomba hisamborana ireo mpitsidika raha ny marina nanao ataovy amin'ny tranokala. Manampia taratasy fisoratana anarana hahafahanao misambotra ireo mpitsidika liana, ary manosika hafatra amin'izy ireo rehefa misy ny fotoana mety.
Ary rehefa mamolavola sy mandefa ireo mailaka ireo ianao dia ampiasao ireto fomba fanao tsara indrindra ireto:
Mpikambana ao amin'ny LeadPages izahay ary izany no rohy eto amin'ity lahatsoratra ity!
Tags: mailakamailaka Marketingmailaka junklahatahiry fakoamin'ny spam
Torolàlana fialantsasatra ho an'ny Marketing amin'ny finday
Whitepaper: Ahoana ny fomba hampiakaran'ny automatisation ny tahan'ny fiovam-po
Dec 9, 2013 amin'ny 10: 10 AM
Douglas, Lahatsoratra mahaliana. Amin'ny fananana ny atiny mety, ny tsipika Lohahevitra tsara sy ny Call to Action dia afaka mahavita ny tsy fitoviana rehetra. eMail dia hijanona ho fomba doka mora indrindra.